Momba anay - Fuzhou Henghua New Material Co., Ltd.
DOT/Diamond lamina PP Spunbond Nonwoven
Anti-bakteria toetra PP Spunbond Nonwoven
Anti-static toetra PP Spunbond Nonwoven
Toetra mahatanty lelafo PP Spunbond Nonwoven
Lamba Spunbond mahatohitra rovitra / High Tensile
ho an’ny Fambolena
ho an'ny Home Textiles
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana lamba tsy voatenona PP spunbond avo lenta izahay, miaraka amin'ny renivohitra be dia be ary fitaovana famokarana vao haingana.
Henghua Nonwoven dia naorina tamin'ny 2004.With 17+ taona traikefa ao amin'ny PP Spunbond Field.we dia iray amin'ireo tsara indrindra spunbonded nonwovens orinasa mpamokatra entana any Shina, ary ny orinasa no lehibe indrindra ao Fuzhou.
Fanaraha-maso kalitao hentitra amin'ny fenitra ISO9001: 2015 sy SGS.
Manana tsipika famokarana 6 izahay miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra 900 taonina / volana, mpiasa 100, izay afaka miantoka ny fandefasana haingana sy ny fampitana ara-potoana ny antsipirian'ny baiko.
Ny Ekipantsika sy ny Serivisy
Ny fanontanianao mifandraika amin'ny vokatray dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora. Mpiasa voaofana tsara sy za-draharaha hamaly ny fanontanianao rehetra.
Miaraka amin'ny politikan'ny tsenan'ny "Valety haingana sy tombony kely", dia manantena izahay fa afaka miara-miasa amin'ny mpanjifa rehetra ary manararaotra ny fahafaha-tsena. Mino izahay fa ny Fuzhou Heng Hua New Material Co., Ltd no ho safidinao tsara indrindra.
Fitaovana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana: akanjo fandidiana fanariana, satroka, saron-tava, atin'akanjo.
Fampiasana isan'andro: Kitapo fiantsenana, poketra, kitapo CD, akanjo orana, lamban-databatra, saron-tava, tranolay, lahatsoratra azo ampiasaina amin'ny dia, fonon'ny fiara, fitaovana haingon-trano, fitaovana interling kiraro.
Fampiasana fanaka: saron'ny sofa, saron'ny kidoro
Fuzhou Henghua New Material Co., Ltd. dia mpanamboatra 100% Polypropylene Spunbonded Non-Woven Fabrics. Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 2004 miaraka amin'ny fampiasam-bola mihoatra ny 8,000,000 dolara. Mampiasa mpiasa maherin'ny 100 izahay ary manana atrikasa mirefy 15.000 metatra toradroa. Miaraka amin'ny renivohitra be dia be sy fitaovana famokarana vao haingana, dia afaka manome lamba tsy voatenona malaza sy avo lenta ho an'ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Isan-taona, dia manamboatra 10,000 taonina metrika avo lenta 160/240/260cm ny sakany 10-250gsm izahay. 100% polypropylene spunbonded lamba tsy tenona, izay azo ampiharina amin'ny fambolena, fanaovana kitapo, akanjo, kiraro, satroka, haingon-trano, fanaka, fandidiana fandidiana vokatra, ary ny indostria hafa. Aza misalasala miantso anay raha manana fanontaniana ianao.
Ny lamba tsy tenona dia fitaovana ara-tontolo iainana taranaka vaovao. Izy io dia manana endri-javatra manaporofo ny rano, rivotra permeable, malefaka, tsy misy poizina, tsy misy irritant ary maro loko. Ampiasaina betsaka amin'ny lahatsoratra ara-pitsaboana, zavatra fidiovana manokana, vokatra indostrialy, lahatsoratra isan'andro, lahatsoratra momba ny fambolena, kitapo fonosana, lahatsoratra am-pandriana, asa tanana, lahatsoratra haingon-trano, fitaovana an-trano, lahatsoratra momba ny fiarovana ny tontolo iainana.
Mamokatra serivisy namboarina izahay.
Loko: 200+ manolotra loko ho alaina. Manohana loko namboarina.
Ny orinasa akaikin'ny seranan-tsambon'i Fuzhou sy ny seranan-tsambo Xiamen, tongasoa ny fitsidihanao na ny fifampidinihana!
Ny fomba lehibe amin'ny fampiasana lamba tsy tenona dia omena etsy ambany
Nonwoven ho an'ny lamba an-trano
Tsy tenona misy lamina misy teboka
Fitaovana tsy voatenona, Lamba tsy tenona, Lamba tsy tenona Pp, lamba tsy voatenona, Lamba tsy tenona polypropylène Spunbond, Lamba tsy voatenona polypropylène,